Ny gorodona vita amin'ny plastika PVC noho ny fampiasany fitaovana dia azo havaozina amina tontolo iainana PVC, mifanaraka amin'ny fironana momba ny tontolo iainana ankehitriny, dia azo lazaina ho indostrian'ny fiposahan'ny masoandro. Manantena ny ho avy, ny gorodona plastika PVC dia hanana habaka fampandrosoana lehibe kokoa. Rihana plastika PVC ihany koa ...
Ny fiakarana haingana amin'ny gorodona PVC sa hanova ny lamina misy eo amin'ny sehatry ny gorodona?
Ny PVC dia be mpampiasa amin'ny indostria any ambanivohitra maro, soloin'ny pipa sy ny mombamomba azy. Raha ny antontan'isa momba ny fampahalalana Longzhong, amin'ny fampiharana ambany ny PVC amin'ny taona 2018, ny tahan'ny fantsona sy ny mombamomba dia 27% sy 24% avy. Tao anatin'izay taona lasa izay, saingy misy indostria ao ...
Tombantombana sy famakafakana momba ny toe-javatra ankehitriny sy ny firoboroboan'ny tsenan'ny PVC sinoa ao amin'ny 2020
Ny PVC dia iray amin'ireo vokatra klôro biolojika lehibe indrindra ao Shina, ary ny fihinana khôlônia dia mitentina 40% amin'ny famokarana klôro any Chine, ary io no vokatra lehibe hanitsiana ny fifandanjan'ny klôro alkali. Araka ny angon-drakitra, tamin'ny faran'ny taona 2019, ny fahafaha-mamokatra totalin'ny trano ...
Momba ny fampiroboroboana ny gazety sy gazety any ivelany
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-21
Tamin'ny fahatongavan'ny taona vaovao 2020, nihaona ihany koa tamin'ny fijanonana fampisehoana Corvi-19, Fair ary fampirantiana ary koa tsy afaka nanasa vahiny hitsidika ny orinasanay, noho izany, olana lehibe nihaonay tamin'ny gorodona fanondranana. Miaraka amin'ny fanampian'ny HeBei GuoRui Information Technologe Co., ltd, dia nanao dokambarotra ny ...
Flooring Sponjy amin'ny biby, Nahatsapa ny Flooring Flooring ny biby, Pvc Sponjy Flooring, Floor Carpet Roll, Karipetra Pvc, Floor,